“ ရွာ့ကွပ်ပျစ်လေး ပျော်နေတယ် ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ ရွာ့ကွပ်ပျစ်လေး ပျော်နေတယ် ”
“ ရွာ့ကွပ်ပျစ်လေး ပျော်နေတယ် ”
Posted by Swal Taw Ywet on Oct 3, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 25 comments
မန္တလေးဂဇက် ရွာသူား အားလုံး မင်္ဂလာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ၂၉၊၉၊၂၀၁၃ မနက်ပိုင်းက ကျနော် စွယ်တော်ရွက် ဖြစ်ချင်နေခဲ့တဲ့ ရွာ့ကွပ်ပျစ်ကလေး အသက်ဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ပါပြီ။ ရွာသူား တွေ တွေ့ဆုံမယ့် ပွဲအတွက် ၂၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းကတည်းက စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပါ။ ကျနော့်စာသင်ခန်းက စားပွဲ ကုလားထိုင်တွေ ဖယ်ပစ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ပလပ်စတစ်ဖျာတွေခင်း၊ ဒူးတိုက်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ပေါ့။ ၀ှိုက်ဘုတ်မှာ တစ်ခုခု ရေးဖို့ လိုနေတဲ့ ဟာကွက်ကြီးကိုလည်း သိနေတယ်။ အခုတစ်လော အသုံးများနေသလို “တွေ့ဆုံပွဲ” လို့ပဲ ရေးရမလား၊ “ဆွေးနွေးပွဲ” လို့ပဲ ရေးရမလားပေါ့။
ဦးကြီးမိုက် ကြိုတင်စစ်ဆေးလိုအပ်သည်များလမ်းညွှန်မှာကြားဘို့ ရောက်လာတော့ တိုင်ပင်မိရော.. တစ်ခုခု ရေးကြရအောင်လို့လေ.. စွယ်တော်ရွက်ဆီမှာ တစ်ပိုင်းတစ်စ ရှိနေတဲ့ ကဗျာ အပိုင်းအစလေးတွေ ရေးထားဖို့ ပြောဖြစ်တယ်။ အလယ်တန်းကျောင်းသား ဘ၀လောက်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလက်ရွေးစင် စာအုပ်ထဲကပါ။ အစအဆုံး မမှတ်မိတော့လို့ ဒီရွာထဲမှာတောင် ပို့စ် တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ တင်ပေးခဲ့သေးတာ။ အရီးခင်လတ်တို့ ဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးလေ.. ။ ခုလဲ အစ အဆုံး မရပြန်ဘူး။ ဦးကြီးမိုက်ကလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စပဲရတယ်။ ၂ ယောက်ပေါင်းလည်း တစ်ပုဒ်လုံး မပြည့်ပြန်ဘူးဗျာ။ နောက်ဆုံး လူမစွမ်း နတ်မ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း သကြားမင်းဆီ စစ်ကူလှမ်းတောင်းရတော့တာပေါ့။ ခေတ်လူငယ်တွေများ တော်လိုက်တာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တွေ့အောင် ရှာနိုင်တယ်ဗျာ.. ။ သဟာနဲ့ မန္တလေးကနေ ဖုန်းနဲ့ရွတ်ပြ၊ ဒီဖက်မှာ တစ်ယောက်က ၀ှိုက်ဘုတ်ပေါ်၊ တစ်ယောက်က စာရွက်ပေါ် ချရေးပြီး လိုက်ကူးရတာပေါ့။ ပြီးတော့မှ ဦးကြီးမိုက်က ၀ှိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာ အချောရေးပေးခဲ့တာ။ သူပြန်သွားမှ ကျနော်က ၀ှိုက်ဘုတ်ကို ပြောင်အောင် လိုက်သုတ်ပေးခဲ့တာ.. ကဲ……. ကဲ.. ဒီမှာ ကြည့်ကြပါဗျို့..
White Board ပေါ်က ကဗျာ။
၂၉၊၉၊၂၀၁၃ ရက် တနင်္ဂနွေ မနက်အစောကြီး ၄ နာရီခွဲလောက်ကတည်းက နိုးနေတော့တာ။ ပြန်အိပ်လို့လည်း မရမယ့်အတူတူ ကွပ်ပျစ်တင်မက ပါတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ သန့်ပြီးတောက်ပြောင်သွားအောင် ရှင်းလင်းနေမိတော့တယ်။ မနက် ၇ နာရီမခွဲခင် ရွာလူကြီးတွေ တဖွဲဖွဲ ရောက်လာပါလေရော.. ဦးကြီးမိုက်၊ ဦးဦးပါလေရာနဲ့၊ ကိုပီချိုကြီးတို့က အောက်မှာ ကြိုဆိုရေးလုပ်နေတုန်း စားစရာ မုန့်ထုပ်တွေ တနင့်တပိုးနဲ့ ပထမဦးဆုံး တက်လာတာက မမပဒုမ္မာတို့ အမွှာညီအစ်မပါ။ စွယ်တော်ရွက်ကတော့ ရေနွေးအိုးကို ဒိုင်ခံတည်နေရတော့တာပေါ့။ ဦးကြီးမိုက်တို့ ဦးဦးပါတို့က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်လာခဲ့တာဆိုပြီး မသောက်ပေမယ့် ၂ ခွက်စီ ဆင့်သောက်သွားခဲ့သူ ၃ ဦးတိတိ ရှိခဲ့ပါသဗျ။
တစ်ဦးကတော့ အခြားသူမဟုတ်- ကျနော်စွယ်တော်ရွက် ကိုယ်တိုင်ပါခင်ဗျာ၊
ကိုယ်တိုင်ဖျော်တဲ့ကော်ဖီမို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ကော်ဖီကလည်းတကယ်ကောင်းကိုးးးးPremier3in 1 လေ။
“၁ ထုပ်ကို ၃ ခွက် ဖျော်သောက်ရမယ်လေ3in 1 လို့ ရေးထားတာ မတွေ့ဘူးလား” ဆိုတဲ့ ဆရာနေ၀င်းမြင့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ စာသားလေးတွေကိုတောင် သတိရမိသေးဗျာ..
မမပဒုမ္မာတို့ ၀ယ်လာတဲ့ မုန့်တွေကလည်း အမျိုးစုံ အများကြီးပါပဲ။ စွယ်တော်ရွက်တာဝန်ယူတဲ့ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ၀ိုင်းကြတာပေါ့ဗျာ။ စကားတွေလည်း အများကြီးပြော၊ အစားတွေလည်း အများကြီးစားပါပဲ။ စားပွဲ ၂ နေရာပြင်ထားတာကို ဝေးလို့တဲ့၊ ၂ ၀ိုင်းကို ၁ ၀ိုင်းပေါင်းပြီး တကယ့် ဒူးတိုက်ဆွေးနွေးပွဲပ.. အရီးခင်လတ် တောင်းဆိုထားခဲ့တဲ့အတိုင်း အကျွေးအမွေးက ဒီမှာပါ။
မန္တလေးဂဇက် အတွက် တတ်နိုင်တဲ့နေရာက ကူညီပေးချင်နေတာ ဒီကွပ်ပျစ်လေးကိုလုပ်ပေးချင်နေတာကြာလှပေါ့။
တလက်စတည်း ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့ကိုပါ ကွပ်ပျစ်လေးမှာလာဆုံကြဘို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။
နောက်နောင် လစဉ်လတိုင်း ဆုံစည်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။
ဖတ်ရွေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကို အကြောင်း ပြုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရွာသူားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလို၊ ကင်မွန်းတပ်၊မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ပွဲလို အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေးတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်တယ်ဆို ရွာ့ကွပ်ပျစ်လေးကို မမေ့ကြပါနဲ့လို့ပြောပါရစေနော။
ရွာကွပ်ပျစ်ကလေးမှာ ဆုံကြဦးစို့ရဲ့၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။
အရီးခင်လတ် ရှာဖွေပြီးတင်ပေးထားခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေ နဲ့ ရွာကွပ်ပျစ်လေးအကြောင်းကျနော်ရေးထားခဲ့တာလေးတွေကို
“တစ်ယောက်တစ်လက်ဝိုင်းလို့ကူ ဂဇက်ရွာကြီးကောင်းဖို့ကောင်းဖို့” မှာလည်း ဖတ်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။
ဟေးးး ရွာ့ကွပ်ပျစ်ကို လာမုန့်စားချင်လိုက်တာ….
ကို ၂ လွှာပေါင်းမှ ၁ ရွက်က
မုန့်စားချိန် မှာ လာကြည့်မိလို့ ကွက်တိပဲ။
ဂလောက် အာပေါင်အာရင်းသန်အောင် ငြင်းခုန် အဖြေထုတ်ကြတာ..
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာဆို မျက်စောင်းပေါင်းစုံထိုးလိုက်ကြမဲ့ အမျိုး ရယ်။
နောက်ပီး..ဒါဇင်ပလပ်စ် ဆုံရပ်အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့..
ကျောက်စ် ဟောင်ကောင်ပြန်မှ ပွဲဖြစ်တာမို့ မကျေနပ်ဘူးဟူးဟူးးးးးး
နောက်တစ်ခါ ပြန်လာရင် နောက်တစ်ပွဲဗျာ….
ဘာတွေများ ဒူးတိုက်ဆွေးနွေးသလဲသိချင်လိုက်တာ။ မနက်အစောကြီးဆိုတော့လာရခက်လို့။ လာချင်လိုက် တာ။ ကိုယ်မပိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘွမို့ အဝေးကသာ သွားရေကျပါမည်။
ကော်ဖီ ကောင်းပါ၏ ၊
မုန့်ကလည်း ဂွတ်ပါ၏ ၊
ရွာအရေး တက်ကြွပုံများကလည်း အံ့သြစေပါ၏ ၊
လမ်းထိပ်အထိ ပြန်ပို့ပေးသော အဘဖောကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ၊
ကွပ်ပျစ်ကလေးတွင် ကျင်းပမည့် ပွဲတိုင်းကိုလည်း တက်နိူင်အောင် ကြိုးစားမည့်အကြောင်း . . . .
မုန့်တွေကျန်တယ်ဆို။ အနော်သာလာဖြစ်ရင် လောက်တောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ နီးလျက်နဲ့ဝေး ဖြစ်သွားတာ ရင်နာလိုက်တာ။ နောက်ခါကျ သေချာလာစား အဲ သေချာလာခဲ့ပါ့မယ်လို့
ခရီးသည်ကြီး ပို့စ်ကြောင့် ရွာထဲက အသံတွေညံသွားပြီး
တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ရှေ့အရေး ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ရှိသမို့
နေရာရွေးကြတော့ ခါတိုင်းတော့ လဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ချိန်းပြီးဆုံဖြစ်တာများပါတယ်
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုစွယ်တော်ရွက်က သူ့အိမ်မှာလုပ်ဖို့ ဖိတ်တာရယ်
ကျုပ်တို့ကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်
ပြောတတ်ကြသူတွေဆိုတော့ ကိုစွယ်တော်ရဲ့ ရွာ့ကွပ်ပျစ်ပဲရွေးလိုက်ကြတယ်
ကိုစွယ်တော်ရဲ့ စေတနာကြောင့်ထင်ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ ကိုလည်း ပိုမိုစည်းလုံးစွာဖွဲ့၊ ရှေ့ဆက်သွားမဲ့မူဝါဒတွေချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်..
အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီလ စက်တင်ဘာအတွက် ဖတ်ရွေးပို့စ်တင်မှပဲ ထည့်ရေးပါမယ်ဗျာ
ကိုစွယ်တော်တစ်ယောက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပညာဖြန့်ဖြူးရေးအလုပ်
ကော်ဖီ ၂ ခွက်ဆင့် သောက်သွားတဲ့ အထဲ
ကျွန်တော်လည်း ပါတယ်ထင်မိတာပဲ ကိုစွယ်တော်ကြီးရေ…။
2 in 1 စွယ်တော်ရွက်ရဲ့ ရွာ့ကွပ်ပြစ်လေးက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ပေ့ါ………
ကဗျာလေးက ရွာအရေး တိုင်ပင်ကြတာနဲ့ အံကိုက် ရှာတတ်ဖွေတတ်ပါပေတယ်။
တစ်ခုပဲ သက်ကြားအို ဆိုတာ………….
မောင်မတ်တို့၊ နှင်းဆီစိမ်းလေးတို့ကို အားနာလို့ပါ။
ကျ​နော်​လည်း လာပြီး ​ပျော်​ချင်​ပါတယ်​ဗျို့…
ရွာလူကြီးတွေက ကွပ်ပျစ်မှာ အစည်းအဝေးပဲ လုပ်တာ
ရွာကွပ်ပျစ်မှာ ရွာသူားတွေနဲ့ အားရပါးရ ဆုံချင်သေးတယ်ဗျာ
မန်းကနေ လွှတ်တော် လှမ်းတက်တာ ကျုပ်ပေါ့ဗျာ
ရှေ့က ၂ ယောက်က ၀န်ခံသွားမှတော့ ကိုယ်လည်း ၀န်ခံလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။
အဲဒီ့နေ့က ကော်ဖီ ၂ ခွက် ဆင့်သောက်သွားတဲ့ တတိယတစ်ယောက်က Green Rose ပါ..
မုန့်တွေအများကြီး စားမှတော့ ကော်ဖီက ၂ ခွက်တော့ ကုန်တာပေါ့။
အမှတ်တရ လက်ဘက်ရည်ဝိုင်း ပုံလေး အတွက် ကျေးကျေးကြီးပါ ကိုစွယ်တော်ရွက် ရေ။
ကျွန်မ ကတော့ အဝေးက ဘဲ နီး နေပါတယ်။
နောင်ကြုံ လို့ အခွင့်သာချိန် စကားတွေ တစ်ဝကြီးပြောချင်ပါရဲ့။
အခုတော့ Database Error နဲ့ ရန်ဖြစ်လိုက်ဦးမယ်။
သူကြီး ကိုလဲ သနားပါရဲ့။
ရွာသားအသစ်ဆိုတော့ကာ စီနီယာတွေထိုင်တဲ့ ကွပ်ပျစ်နားမှာ မထိုင်ရဲလို့ မုန့်ပဲနှိုက်စားတွားတီ…အဟိဟိ
အဲဒီလက်တောက်လောက်ခွက်ကလေးတွေနဲ့… ၂ခွက်ဆင့်မဟုတ်.. ၃ခွက်ဆင့်သင့်ကြောင်း..
ဓါတ်သေပုံထဲမှာ ပါတာတွေက ရေနွေးကြမ်းသောက်ရန်ကြွေခွက်လေးတွေပါခင်ဗျ။
ကော်ဖီခွက်တွေကို သွားရေကြမစိုးလို့ ပြဘူး။
သဂျီး ပြန်ရောက်ရင် တွေ့ရပါစေ့မယ်။
ဟိုကဗျာလေး ဖတ်လိုက်ရဒေါ့ …
ဖီးလ်တစ်မျိုး ဖစ်တွားဒယ် …
အတော် လိုက်ဖက်တယ် …။
အဲ့ ကွတ်​ပစ်​ကအစည်းအ​ဝေးကို​နောက်​ခံပြုပြီး ဝတ္ထု ​ရေး​နေပါတယ်​
ရွာမှ သက်ကြားရွယ်အိုများတို့တဲ့..မီးမီးတို့ကို ပေါရက်လိုက်တာ။
အဲ ..သူကြီးလာရင် အဲဒီမှာ ထပ်ဆုံမယ်။